काठमाडौं – टाटा मोटर्सको ह्याचब्याक कार एनआरजी आज नेपाली बजारमा लन्च भएको छ । एक कार्यक्रमका बीच टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले सो कार सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक समारोहमा टाटा मोटर्सका इन्टरनेसनल बिजनेस ह...
हार्ले डेभिडसनले बजारमा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको पहिलो इलेक्ट्रिक बाइक लाइभवायरको मूल्य सार्वजनिक गरिएको छ । यसको मूल्य २९ हजार ७९९ अमेरिकी डलर पर्नेछ । यो बर्षको तेस्रो त्रैमासिकतिर यो उत्तर अमेरिका र युरोपको बजारमा उपलब्ध हुनेछ । हार्लेको सो इल...
आज नेपालमा लन्च हुँदैछ टाटा एनआरजी, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं – टाटा मोटर्सको ह्याचब्याक कार एनआरजी आज नेपाली बजारमा लन्च हुँदैछ । एक कार्यक्रमका बीच टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले सो कार सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । एनआरजी अंग्रेजी शब्द इनर्जीका बीचका ती...
चैत महिना भित्रै आउदै छ नेपालमा पनि केटीएम १२५ ड्युक
केटीएमले भारतीय बजारका लागि केही दिन पहिले मात्र लन्च गरेको बाइक १२५ ड्युक आगामी चैत महिना भित्रै नेपाली बजारमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ । सो बाइक केटीएमको १२५ सीसीको सेगमेन्टमा पहिलो बाइक हो । सो बाइकको मूल्य दिल्ली एक्स सोरुममा १ लाख १८ हजार भारु तो...
यस्तो छ सौर्य उर्जाबाट चल्ने भारतको पहिलो चालकरहित बस
नवीकरणीय शक्ति सौर्य उर्जा र विद्युुतीय मोटरको प्रयोगबाट भारतको एलपीयू अर्थात लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विधार्थीहरुले चलक रहित वसको निर्माण गरेका छन् । अधिकतम गति ३० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको उक्त बस एक पटकको फुल चार्जबाट ७० किलोमिटर सम...
निसान किक्स जनवरी २२ मा लन्च हुने, नेपालमा पनि छिट्टै आउने
कम्प्याक्ट एसयूभी सेगमेन्टमा निसानले आगामी जनवरी २२ मा निसान किक्सलाई भारतीय बजारमा लन्च गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो कारको भारतीय बजारमा निकै नै प्रतीक्षा भइरहेको छ । निसान किक्स डिजाइनको मामिलामा निकै नै राम्रो छ भने यसको सिटलाई पनि प्रशस्तै...
हन्टरको डेटोना ३५०, मूल्य ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं – नेपालमा अष्ट्रेलियन कम्पनी ‘हन्टर’ का बाइक भित्रिएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत बर्ष पुस महिनाको पहिलो साता हन्टरका बाइक नेपालमा भित्रिएका थिए । नेपालको लागि हन्टर मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता राई मोटर्सले हन्टर मोटरसाइकल...
यस्तो छ मारुती सुजुकीको नयाँ वागन आर, प्रतिस्पर्धा गर्ला हुन्डाई स्यान्ट्रोसँग ?
मारुती सुजुकी वागन आर आजकाल समाचारमा निकै चर्चित छ । केही तस्बिर र अन्य जानकारीका साथ नयाँ वागन आरको अफिसियल ब्रोसर वाहिर आएको छ । वागन आरको नयाँ भेरिएन्ट र स्पेसिफिकेसन्स सार्वजनिक भएको छ । आगामी जनवरी २३ मा यो कार भारतमा लन्च गरिने बताइएको छ । हाल...
यस्तो हुनेछ यामाहाको नेकेड बाइक एमटी–१५, पल्सर र अपाचेसँग टक्कर पर्ला ?
यामाहाले भारतीय बजारमा १५० सीसी सेगमेन्टमा एक नयाँ बाइक लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले यामाहा एमटी–१५ नामक सो बाइक आगामी सन् २०१९ मा लन्च गर्ने तयारी गरेको समाचार पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यामाहाको सो बाइक सबैभन्दा प्रिमियम १५० सीसी...
बढ्दो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चीनले विश्वकै सबैभन्दा सानो इलेक्ट्रिक कारको निर्माण गरेको छ । चीनको अटोमोबाइल निर्माता कम्पनी ग्रेटवाल मोटर्सद्वारा बनाइएको सो इलेक्ट्रिक कारले एक पटक चार्ज गर्दा ३५१ किलोमिटर सम्मको यात्रा तय गर्छ । यसको मूल...
अफरोडका लागि उपयुक्त लेमोटोका बाइक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं – नेपालमा लेमोटोका दुई मोडलका बाइक उपलब्ध छन् । ती मध्ये लेमोटो एलआरएफ २५० एम (Lemoto LRF 250 M) एक हो । कम्पनीले यस्तै मोडलको अर्को बाइक एलआरएफ २५० इन्ड्युरो पनि उपलब्ध गराएको छ । लेमोटोले नेपालमा पहिलो पटक डर्ट रेन्जको यो बाइक...
काठमाडौं – बढ्दो प्रदूषण र पेटोलियम पदार्थको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको इटालियन कम्पनी बेलाका विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । बेलाका ड्युरो, एस्प्रो र ग्लोरिया गरि ३ वटा फरक मोडलका स्कुटर उपलब्ध छन् । त्यसै...
काठमाडौं – इटालियन बाइक निर्माता कम्पनी बेनेलीको सबैभन्दा सस्तो बाइक नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ । बेनेलीका दुई मोडलका बाइक टीएनटी १५० र टीएनटी १५० आई केही दिन भित्रै नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएका छन् । यी बाइकको मूल्य क्रमशः २ लाख ३० हज...
टाटाले ल्यायो विंगर मिनीबस, यस्ता छन् मूल्य र विशेषता
काठमाडौं – टाटा मोटर्सको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नेपाली बजारका लागि विंगर मिनीबस सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा बढ्दो टुर र ट्राभललाई लक्षित गरेर ल्याइएको सो मिनीबसको मूल्य ३० लाख ८० हजार रुपैयाँबाट प्रारम्भ हुन्छ । विं...
यूएमले ल्याउदै छ पहिलो स्कुटर चिल १५० एबीएस
अमेरिकी बाइक निर्माता कम्पनी यूएमले भारतीय बजारका लागि १५० सीसीको स्कुटर लन्च गर्ने योजना बनाएको छ । सो स्कुटरको नाम चिल १५० एबीएस राखिने छ । सो स्कुटर हाल बजारमा प्रचलित भेस्पाका स्कुटर जस्तै रेट्रो स्टाइलिङ हुनेछ । एक स्लाइडमा देखिए अनुसार यसमा क्...
भारतीय बजारमा सुजुकी मोटरसाइकलले पावरफुल स्पोर्टस् बाइक हायाबुसाको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय बजारमा यसको मूल्य १४ लाख भारु तोकिएको छ । कम्पनीले यो बाइकलाई कालो र ग्रे कलरमा ल्याएको छ । नयाँ सुजुकी हायाबुसामा अपडेटेड ग्राफिक्स र दुई साइड...
१ करोड २५ लाख मूल्यको फोर्ड रेन्जर -याप्टर नेपालमा
काठमाडौं – नेपाली बजारमा फोर्डको नयाँ पिकअप ट्रक रेन्जर -याप्टर भित्रिएको छ । गत शनिबार हात्तीबन रिसोर्टमा सम्पन्न ‘वाइल्डरनेस गेट अ वे’ कार्यक्रममा फोर्डले सो गाडी पनि लन्च गरेको हो । हाल फोर्डको सोरुममा सो गाडी बिक्रीका लागि उ...
अब टोयोटा कोरोल्ला होइन, मारुती सुजुकी कोरोल्ला
सन् २०१८ को प्रारम्भमै सुजुकी र टोयोटा मिलेर भारतमा केही मोडलका कार संयुक्त रुपमा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । मारुती सुजुकीले टोयोटालाई बलेनो ह्याचब्याक र भिटारा ब्रेजा कम्प्याक्ट एसयूभी तथा टोयोटाले मारुती सुजुकीलाई कोरोल्लासेडान उत्पादनका लागि...
औपचारिक लन्च भयो बजाज प्लाटिना ११० भारतमा
बजाज अटोले भारतमा ११० सीसीको इन्जिनका साथ नयाँ बाइक प्लाटिना लन्च गरेको छ । यसको मूल्य ४९ हजार १९७ भारु राखिएको छ । केही दिन पहिले डिलरहरुमा देखिएको भए तापनि यसको औपचारिक लन्च गरिएको थिएन । यसमा ट्युबलेस टायर, ड्युअल स्प्रिङ अन स्प्रिङ र नाइट्रोक्स...
भारत आउदै छ स्कुटर ब्रान्ड ल्याम्ब्रेटा
स्कुटर प्रेमीहरुका लागि खुसीको खबर । क्लासिक इटालियन ब्रान्ड ल्याम्ब्रेटा आगामी २०२० को अटो एक्सपोमार्फत भारतीय बजारमा फर्किने योजना बनाएको छ । आगामी २०२० को फेब्रुअरी ६ देखि ९ सम्म हुने अटो एक्सपोमा ल्याम्ब्रेटाले स्कुटरको प्रोटोटाइप सार्वजनिक गर्न...
आयो अर्को विद्युतीय कार प्युजो पार्टनर टेपी, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
काठमाडौं – फ्रेन्च कार निर्माता कम्पनी प्युजोको विद्युतीय कार ‘पार्टनर टेपी ईभी’ नेपाली बजारमा आइपुगेको छ । नेपालमा प्युजोको आधिकारिक वितरक सांग्रिला मोटर्स प्रालिले सो कार भित्र्याएको हो । पार्टनर टेपीको मूल्य ६० लाख रुपैयाँ काय...
यामाहाले ल्यायो यूबीएस सहितको सलुटो आरएक्स ११० र सलुटो १२५
यामाहा मोटरसाइकलले यूबीएस सहितको सलुटो आरएक्स ११० र सलुटो १२५ बाइक भारतमा लन्च गरेको छ । यी मोटरसाइकलमा यूबीएस अर्थात युनिफाइड ब्रेकिङ सिष्टम उपलब्ध छ । सलुटो आरएक्सको मूल्य ५२ हजार भारुबाट शुरु हुन्छ । यसको डार्क नाइट कलर स्किमको मूल्य ५३ हजार भारु...
के छन् हालै नेपाल भित्रिएको बीएमडब्ल्यु बाइकका विशेषता ? कति छ मूल्य ?
गत शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेपालमै पहिलो पटक बीएमडब्ल्यु बाइक भित्रिएको औपचारिक घोषणा गरियो । इन्ट्री लेवल सेगमेन्टमा भारतीय प्लान्टबाट उत्पादन गरिएका यी बाइकको बिक्री–वितरण टर्क मोटरले गर्न थालेको हो । उत्कृष्ट डिजाइनआकर्षक बडी र उच्च पर्...
काठमाडौं – बीएमडब्ल्युका बाइक पहिलो पटक नेपाली बजारमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेका छन् । बीएमडब्ल्यु मोटरार्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक टर्क मोटरले सो बाइक औपचारिक रुपमा नेपालमा उपलब्ध गराएको हो । हाल बीएमडब्ल्युको जी ३१० जीएस र जी ३१०...